ကျန်းမာရေးကို တဖြည်းဖြည်းထိခိုက်စေတဲ့ အမူအကျင့်များ
ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ အသင့်စား အစားအစာတွေကို နေ့စဉ်နီးပါး စားသုံးနေ မှ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံမှာ သင်မထင်မှတ်ဘဲ ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ အလေ့အကျင့်တွေဟာ သင့်ကျန်းမာရေးကို တဖြည်းဖြည်း ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီအကြောင်းအရာတွေ သတိပြုမိနိုင်အောင် သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမယ့် အမူအကျင့်တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
Read more about ကျန်းမာရေးကို တဖြည်းဖြည်းထိခိုက်စေတဲ့ အမူအကျင့်များ
မျက်နှာအဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံ ရှိသူတွေအတွက် အဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့
ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျဉ်းအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြပေး
Read more about ဆားဝက်ခြံနှင့် ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေဖို့ သဘာဝနည်းလမ်းများ
ငါးရိုးစူးခြင်းဟာ စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာမျိုးတော့ မဟုတ်ပေမယ့် ခံစားရခက်တဲ့ဝေဒနာတမျိုးလို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အရိုးစူးတဲ့အခါ အစားအသောက်ပျက်ပြီး နေရထိုင်ရခက်တာကြောင့် အမြန်ဆုံးသက်သာချင်စိတ်နဲ့ မလုပ်သင့်တာတွေ လုပ်မိတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ မတော်တဆလည်ပင်း အရိုးစူးတဲ့အခါ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြုလုပ်နိုင်တာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သံပရာသီးမှာပါဝင်တဲ့ အက်စစ်ဓာတ်ဟာ လည်ချောင်းတဝိုက်မှာ ထောက်နေတဲ့ ငါးအရိုးကို ပျော်ကျသွားစေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သံပရာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းခန့်လောက်ကို ရေအနည်းငယ်နဲ့ရောပြီး သောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
Read more about လည်ပင်းအရိုးစူးတဲ့အခါ ပြုလုပ်သင့်တဲ့အရာများ
ရေနွေးပူလောင်တာ၊ ဆီပူလောင်တာနဲ့ အပူလောင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့အခါ တော်တော်များများက လွယ်လွယ်ကူကူ အိမ်သုံးဆေးအဖြစ် သွားတိုက်ဆေးကို အပူလောင်ထားတဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းတတ်ကြပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေးရဲ့ ပူရှိန်းရှိန်း အေးမြတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် အပူလောင်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဒါဟာ အရေပြားအတွက် ကြီးကြီးမားမား အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်တွေက ရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။
Read more about အပူလောင်ဒဏ်ရာကို သွားတိုက်ဆေးမသုံးသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း
Read more about ခေတ်သစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Telemedicine ဆိုတာ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ဘာကြောင့် Ultrasound (တယ်လီဗွီးရှင်းဓာတ်မှန်) ရိုက်သင့်သလဲ
• Ultrasound တယ်လီဗွီးရှင်းဓာတ်မှန် လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မိခင်လောင်းတိုင်းက ကိုယ့်ရင်သွေးလေး ယောကျာ်းလေးလား မိန်းကလေးလား သိချင်စိတ်နဲ့ ရိုက်ကြည့်ချင်ကြတာပါ.
Read more about ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ဘာကြောင့် Ultrasound (တယ်လီဗွီးရှင်းဓာတ်မှန်) ရိုက်သင့်သလဲ
ခန္ဓာကိုယ်မှာ Vitamin C ဓာတ်ချို့တဲ့နေကြောင်း သတိပေးတဲ့ လက္ခဏာများ
ဗီတာမင်စီဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တွေထဲက တမျိုးဖြစ်ပြီး ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့တဲ့အခါ ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ အသီးအနှံတွေမှာ အများဆုံးပါဝင်တာကြောင့် ခဲခဲယဉ်းယဉ်း ရှာဖွေစားသောက် နေစရာ မလိုပါဘူး။
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဗီတာမင်စီ ချို့တဲ့နေကြောင်း ခန္ဓာကိုယ်က သတိပေးနေတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) သွားဖုံး သွေးယိုတာမျိုးနဲ့ ရောင်ရမ်းတာတွေ ဖြစ်ပေါ်မယ်
Read more about ခန္ဓာကိုယ်မှာ Vitamin C ဓာတ်ချို့တဲ့နေကြောင်း သတိပေးတဲ့ လက္ခဏာများ
ညဘက် ရေချိုးရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရရှိသလဲ..?
လူတိုင်းလိုလို ကိုယ်ခန္ဓာနုပျို လန်းဆန်းနေတာကို အလိုရှိကြပါတယ်။ ရေချိုးခြင်းဟာလဲ ခန္ဓာကိုယ် လန်းဆန်းသွားအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းထဲက တစ်မျိုးအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညဘက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်သလား ဆိုတာကို လေ့လာ ကြည့်ရအောင်ပါ။
Read more about ညဘက် ရေချိုးရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရရှိသလဲ..?
ကျောရိုးအဆစ်ကြား အရွတ်ဝိုင်း နေရာလွဲသွားခြင်းကြောင့် ကျောရိုးဆစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပွတ်တိုက်မိသောအခါ ခါးနာခြင်း (Back pain) ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ ခါးနာခြင်းဟာ လူတစ်ဦးရဲ့လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ခံရခက်စေပြီး နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်သွားလျှင် ကုသရခက်ခဲစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ခါးနာခြင်းဖြစ်ပေါ်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အောက်ပါနည်းလမ်း ၆ ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ခါးကွေးပြီး မထိုင်ပါနဲ့။
Read more about ခါးနာခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
အမျိုးသမီးများ သတိပြုသင့်တဲ့ ရေအိတ်တည်ခြင်း
ရေအိတ်တည်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အတိအကျ မပြောနိုင်ပေမယ့် နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ ပြောင်း လဲလာတာ၊ စိတ်ဖိစီးမှု များလာတာတွေနဲ့ အဓိက သက်ဆိုင်တယ်။ ဓာတုဆိုးဆေး မကင်းတဲ့ အစားအသောက်တွေ အစားများလာတယ်။ အဲဒီဆိုးဆေး၊ ပလပ်စတစ်၊ ဟော်မုန်းဆေး၊ တာရှည်ခံဆေးတွေထဲ မှာ xenon estrogen တွေ ပါလာတယ်။ အဲဒါတွေက အမျိုးသမီးတွေမှာ သွားပြီး ဒုက္ခပေးတာလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလိုရေအိတ် တည်တာက မျိုးရိုးနဲ့လည်း သက်ဆိုင်သလို ခပ်ဝဝဗိုက်ခေါက် ထူထူ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများတယ်လို့ ဆိုတယ်။
Read more about အမျိုးသမီးများ သတိပြုသင့်တဲ့ ရေအိတ်တည်ခြင်း